Ụmụnwaanyị emeela ngagharị iwe maka achụmanọrụ Globacom – hoo!haa!!
COVID-19 : MKPỌCHI OBODO ERUGHI N'IME OBODO
MBULI ỤGWỌ ỌKỤ GA-ADỊ IRE SITE N'ABALỊ IRI ATỌ N'ỌNWA JUUN-NERC
USORO NCHEKWA KỌTỤMA: KEDU KA IGP DARA ULE MAKA NCHEKWA SI EKUZI NDỊ GỌVANỌ ALA-IGBO MAKA NCHEKWA? - CLO
ỌKAIWU A NA-EBO EBUBO IKESA AKỤKỌ NA IKPEAZỤ JI ARỤSỊ NDỊ HINDU ṄỤỌ IYI NOZI NA NGA
COVID-19: SINETI INYE ỌKARA ỤGWỌ ỌNWA HA, HAPỤ EGO MMACHI AKPA HA BỤ AGHỤGHỌ - INTERSOCIETY
NDOZI OBODO: "ỌNYỊBA" DỌKỊNTA LAZ UDE EZE APỤTALA N'ỌGBỌ
ỊKWỤSỊ NKESA ỌRỊA KORO N'ALA-IGBO - DỌKỊNTA LAZ UDE EZE
Ụmụnwaanyị emeela ngagharị iwe maka achụmanọrụ Globacom
Enugwu: Ụmụ nwanyị yi uwe ojii ruru otu narị n’ọnụ ọgụgụ nọrọ ụnyahụ mee ngagharị iwe n’Enugwu maka achụmnọrụ ụlọ ọrụ nzikọrịta ozi, Globacom chụrụ ụmụ nwanyị ndi luru di nakwa ndi muworo nwa site n’abalị itoolu nke Ọnwa Maachị afọ a.
Otu chịkọbara ya bụ ngagharị iwe bụ otu Coalition of Women for Justice mere nke onye isi ha bụ Oriakụ Onyeka Okey Udegbunam. Ha kwara arịrị na ụfọdụ ụmụ nwanyị ndi a a chụrụ n’ọrụ anọruola afọ iri na abụọ bụ ndị achụrụ n’ọrụ ma e nyere ha sọọsọ ụgwọ otu ọnwa were sị ha lawa.
Ụmụnwaanyị ndị gbakọtara ọnụ ime ngagharị iwe a bụ ndị otu Igboezue, WACOL, NAWOJ, na ndị ọzọ kwuru na ha ga na-eme ngagharị iwe ruo oge ndị Globacom ga-enyeghachị ụmụnwaanyị ahụ ọrụ ha maọbụ kwụọ ha nrubere ha niile ozigbo ozigbo.
Mana mgbe BBC Igbo kpokuru ndị Globacom, ha sị na ha ekwupụtala ebumnuche ha n’igwe Twitter ha ebe ha sị:
End of Twitter post by @GloWorld
Onyeisi ụmụnwaanyị igboezue bụ Amaka Okonkwo, yọrọ ndị gọọmentị ka ha taa ụlọọrụ Globacom ahụhụ maka inupu isi n’iwu guzobere ọrụ na Naijirịa.
Ụmụnwaanyị ndị ọzọ kwuru okwu gụnyere Egodi Igwe nọchitere anya Wacol, Ifeoma Amuta nke Nawoj, Chibota Edozie nke Nawoj na Chieso Animwagwa nke NUJ gwara ndị NCC na NLC ka ha leba anya n’usoro ọjọọ a ndị Globacom jiri kwusi ndị ọrụ ha.
Ụmụnwaanyị a na-eme ngagharị iwe ji akwụkwọ edepụtachara echiche obi ha wee site n’Ọkpara square dị n’Enugwu gaa obi gọvanọ Enugwu.
Ha gụrụkwara egwu gaa ahịa Ogbete dị n’Enugwu tupu ha agaruo n’ụlọọrụ ndị Globacom wee ziruo ozi ha ụlọ.
Ekele maka akụkọ a gaara bbc.com/igbo
Previous Post: Anyị enweghị ntụkwasiobi na kọmiti nnyocha INEC-ICSCO
Next Post: Mụ na ụmụ nwoke anọ na-arahụ kwa abalị- akwụla di afọ iri n’asaa